Liverpool Oo Heshiis Cusub U Soo Bandhigtay Joe Gomez?
HomeSuuqa kala iibsigaLiverpool oo Heshiis cusub u soo Bandhigtay Joe Gomez?
May 8, 2022 Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha 0
Liverpool ayaa lagu soo waramayaa inay qorsheyneyso inay qandaraas cusub ka saxiixdo Joe Gomez xagaagan. Daafaca ayaa ku dhibtoonayay waqtiga ciyaarta ilaa iyo haatan xilli ciyaareedkan, isagoo ka dambeeya Joel Matip iyo Ibrahima Konate booska daafaca dhexe ee Anfield.
Gomez ayaa xubin muhiim ah ka ahaa kooxdii ku guulaysatay horyaalka ee Liverpool xilli ciyaareedkii 2019-20, laakiin waxa soo gaadhay dhaawac halis ah oo jilibka ah xilli ciyaareedkii hore ilaa haatanna ma awoodo in uu si joogto ah ugu soo laabto qorshaha kooxda kowaad ee Jurgen Klopp.
24-sano jirkaan ayaa kusoo bilowday kaliya seddex kulan oo Premier League ah xilli ciyaareedka oo dhan, waxaana kaliya uu kasoo muuqday todobo jeer guud ahaan horyaalka, taasoo keentay in la isla dhex maro mustaqbalkiisa fog ee kooxda.
Fulham oo dhawaan soo dalacday ayaa lala xiriirinayay xagaagii, halka Tottenham Hotspur ay sidoo kale xiiseyneysay xilli hore.
Si kastaba ha ahaatee, Liverpool Echo ayaa sheegtay in Klopp uu doonayo inuu sii haysto xiddiga heerka caalami ee dalka England, islamarkaana Liverpool ay isku dayi doonto inay qandaraas cusub ka saxiixdo dhawaan.
Gomez ayaa heshiiskiisa haatan waxa uu dhacayaa 2024, ciyaaryahanka laftiisa ayaa la fahamsan yahay inuu doonayo inuu boos joogto ah ka helo kooxda si uu uga mid noqdo xulka Gareth Southgate ee Koobka Adduunka 2022 ka dhacaya Qatar. N
at Phillips ayaa qarka u saaran inuu dib ugu laabto Liverpool ka dib amaahdii uu kula joogay Bournemouth xagaagan, inkastoo warbixintu ay soo jeedinayso in heshiis kasta oo cusub oo Gomez ah ay Liverpool isku daydo inay iska iibiso Phillips si joogto ah.
Gomez ayaa sidoo kale caawiye u ahaa Trent Alexander-Arnold oo ka ciyaara daafaca midig xilli ciyaareedkan, awoodiisa ciyaareed ayaa loo maleynayaa inay tahay sababta ugu weyn ee uu Klopp u doonayo inuu sii haysto.